8 Ngwa Android ka ikori na Enyi | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị nwere ohere ịtụle usoro telivishọn ndị ahụ (akụkọ sayensị), anyị ga-enwe ike ịchọpụta na ụfọdụ ọnọdụ ha nwere ọtụtụ myirịta na ihe anyị na-ebi taa. Nkwurịta okwu gafere ogologo oge n’etiti ọtụtụ mmadụ ọ ghọrọ ihe kachasị mmasị n'usoro isiokwu a, ihe a ga-ewere dị ka a ga - asị na ọ bụ vidiyo vidiyo nke intergalactic.
O doro anya na anyị anọghị na gburugburu ebe a kama kama, na ụwa anyị n'ezie ebe ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ mkpanaka (oge ọ bụla, nke nwere obere) emeela ka ọdịdị ha pụta site n'aka ụlọ ọrụ nrụpụta dị iche iche. N'ime ha, anyị nwere ike ịmata nkata ma ọ bụ ọrụ nzukọ nke vidiyo ma ọ bụ mmemme, ihe e mikpuru emikpu karịsịa ndị nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo; N'ihi nke a, ugbu a anyị ga-eji nkenke oge kwuo 8 ngwa na sistemụ arụmọrụ a ị nwere ike iji maka ụdị ọrụ a.
2 2. Ọnụ ọnụ
4 4. oooo
7 7. Okwu Kakao
8 8. Ahịrị
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ ọrụ ndị mmadụ dị iche iche na-ejikarị, nke bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na akụrụngwa dị maka ọnụọgụ ntanetị dị iche iche; n'ụzọ dị otú a, ka Skype You nwere ike ịnwe ya na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo, na iPad, na kọmputa Mac ma ọ bụ PC, n'etiti ndị ọzọ. Na mgbakwunye na nke a, enwere ike ịme okwu ma ọ bụ mkparịta ụka ahụ iji njikọ data ma ọ bụ Wi-Fi ikuku.
2. Ọnụ ọnụ
A na-ewere ihe ọzọ dị ka ihe kachasị mma maka ọtụtụ ndị mmadụ, nke bụ n'ihi ihe oyiyi magburu onwe ya ị nwetara site na okwu ogbako vidiyo; Dị ka Skype, ebe a ị nwekwara ike ịtọọ okwu otu ma ọ bụ okwu nke ọ bụla, nke ga-adabere na mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere naanị netwọọdụ Wi-Fi, ịnwere ike iji ya zere ị dataụbiga oke data na njikọta 3G.
con Tango ya ọrụ nwere ike ime ka ojiji nke video oku ma ọ bụ naanị olu oku. N'ịbụ a free gam akporo ngwa, ya ọrụ na-uru nke a mma na-enwe ike zipu ozi ederede na obuna foto di n'ime ha. Ngwaọrụ ahụ dakọtara na netwọkụ 3G, 4G na Wi-Fi.
Otu n’ime uru ndị kacha mkpa ọ na-enye anyị oooo, ekwe omume nke jide otu vidiyo vidiyo nke otu ndị otu 12 Ọ bụ isi ihe kpatara ọtụtụ ji eme ya. Na mgbakwunye, oku vidiyo, oku olu, ozi ederede na ọrụ ole na ole ndị ọzọ bụ ndị etinye na ngwa gam akporo a.
N'oge na-adịbeghị anya, Google+ Hangouts Ọ na-eji ọtụtụ ndị mmadụ na kọmputa nkeonwe na n'ezie, na gam akporo mobile ngwaọrụ. Site na ọrụ a ị nwere ohere ikori nkata na otu, ọ bụ ezie njedebe nke ngwá ọrụ na-egosi naanị ndị ọrụ 9. A na-ejikarị Google+ Hangouts eme ihe n'ihi na a na-etinye ngwa gam akporo a na ndabara na ngwaọrụ mkpanaka dị iche iche na sistemụ arụmọrụ a.
E nwere ihe dịka 460 nde ndị ọrụ na-eji a android ngwa, nke dịkwa na ụdị pụrụ iche maka iPhone, Blackberry na ekwentị mkpanaaka nwere Windows Phone; otu n'ime ya kasị ukwuu uru bụ ohere zipu ozi ederede, kpọọ oku n’olu, zipu foto obu ezie, ngwa gam akporo a adighi enye ohere ime nzuko vidiyo.
7. Okwu Kakao
A Okwuo Ọ na-eji na-eme ka free audio oku na kwa ka izipu ozi ederede. I nwekwara ike iru oge otu oku oku ya na ngwa gam akporo a. N'etiti atụmatụ ndị ọzọ, ya na ị nwere ike ijikọ emoticons yana animation yana iji akwụkwọ mmado ole na ole dịka akụkụ nke ozi ahụ. Ihe dị ka nde ndị ọrụ 150 na-eji ngwá ọrụ a, nke dị maka ngwaọrụ mkpanaka gam akporo, yana iOS, Windows Phone, BlackBerry na Bada OS.
con ngwá ọrụ a anyị ga-enwekwa ohere nke ịkpọ oku olu n’efu ma zipụ ozi nye ndị kọntaktị anyị niile na ndị enyi anyị. Ọ dị na mba karịrị 230 ma ewere ya dịka otu kacha mma gam akporo ngwa n'ụwa niile. Ikekwe naanị otu ndọghachi azụ bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke amamọkwa nke ọrụ a na-ezigarakarị ndị ọrụ ya niile.
Site na ndụmọdụ 8 ndị a anyị nyere, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịmasị gị, nke ga-adabere na ụdị ụdị ngwaọrụ mkpanaka na ị nwere n'aka gị yana nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ nke agbakwunyere n'ime ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » 8 Ngwa Android maka Nkata ma ọ bụ Nnọkọ vidiyo
10 nrụọrụ iji budata Ebook n'efu